Naturopathic Physicians Job Description / Ibu Ọrụ Template Na aga-eme - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Naturopathic Physicians Job Description / Ibu Ọrụ Template Na aga-eme
Naturopathic Physicians Job Description / Ibu Ọrụ Template Na aga-eme
Jekọb June 28, 2016 Uncategorized 2 Comments 390 Echiche
Chọpụta, aka, and assist in preventing diseases utilizing a method of exercise that is in line with the pure healing capability of an individual. May use physical, mental or physical approaches. May also utilize pure treatments, star or prescription medication, oriri, herbs, or additional natural remedies.
Job Nkà iru eru
Order analytical imaging procedures such as for example radiographs (x ụzarị), ultrasounds, mammograms, and bone densitometry assessments, or send people to different health professionals regarding these procedures.
For example homeopathy or therapies, enye agwọ ọrịa Asian ma ọ bụ Ayurvedic ịgba akwụkwọ, diathermy na electrotherapy , ọrụ ezigbo mmadụ tinyere ikuku, na-ekpo ọkụ, chilly, mmiri ma ọ bụ ultraviolet ọkụ ka catalyze ahụ mmadụ na-emeso onwe ya na.
nye, kesaa, ma ọ bụ nwere ike ikwu na organic ọgwụ tinyere dietary Mmeju, herbs, oriri ma ọ bụ botanical Efrata , vitamin, nutraceuticals , na amino-asịd.
Carryout ahụ ule na anụ ahụ na nzube nnwale maka analytic ojiji.
Interview ndị mmadụ na-na-akọ na-egosi na ahụ ike iche.
Agwa ahịa banyere ahụike ochichi.
Record people’ histories, including identifying information, main complaints, ọrịa, prior healthcare or family histories, or characteristics.
Active-Listening-To what other-people are saying offering entire attention,, eji oge na ume ịghọta ihe e kere, ịjụ ajụjụ dị ka ziri ezi, na mgbe igbochi anyị na-ezighị ezi ụfọdụ.
Ekwurịta okwu-Ịgwa ndị banyere eziokwu effortlessly.
Monitoring-CheckingOREvaluating performance of yourself, ndị mmadụ n'otu n'otu na ndị ọzọ, or corporations consider remedial actions or to make advancements.
Control-Agbanwe omume na ekele ndị ọzọ’ eme.
Installation-Installing packages, ngwaahịa, wiring, or tools to meet up specifications.
Quality-Control Research-Ndikụre-achọpụtazi na ule nke ngwaahịa, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ na ọrụ na-ekpe ikpe irè ma ọ bụ àgwà.
Ikpe na mkpebi-Iche echiche banyere comparative ahịa na uru nke kwesiri omume na-ahọrọ onye na-kacha adabara.
Systems Analysis-Ịmata ụdị Usoro kwesịrị ịrụ na otú mgbanwe arụmọrụ, ọrịa, tinyere ọnọdụ nwere ike na mmetụta ga esi.
Systems Evaluation-Ịmata jikoro ma ọ bụ ihe ịrịba ama nke usoro ịrụ ọrụ na ikwu na zaa nke igwe, jikoro mkpa iji welite ma ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị irè.
Time-Management-Ijizi nwere oge dị ka nke ọma dị ka ndị ọzọ’ oge nke otu.
Supervision of Money-Ịmata otú dollars yiri ka a nọrọ na-nweta ọrụ emezu, na ahịa banyere ndị a ụgwọ.
Supervision nke Materials Sources-Inwe na na-na na ezigbo ojiji ngwaọrụ, iche, na ihe nwere na mkpa ime kpọmkwem ọrụ.
Supervision of Personnel Resources-emepe na-akpali akpali, ma na-eduzi folks ka ha ha na-arụ, ekpebi ihe ndị kasị mma mmadụ maka ọrụ ahụ.
ọzụzụ Iwu ahụmahụ Mkpa
Karịrị 1 yr, upto 2 afọ na gụnyere,
Task Command Nkà Iwu
ntachi obi – %
Cultural Usoro – %
Pressure fọrọ – %
ịtụkwasị – %
Mmata nke akụkụ – %
na-eche echiche – %